10 Talooyin Sida Loogu Seexdo Tareenka | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 10 Talooyin Sida Loogu Seexdo Tareenka
Waqtiga Akhriska: 6 daqiiqo(Last Updated On: 19/02/2021)
3 saacadood ama 8 saacadood – Safar tareen waa goob ku habboon nasashada nasashada. Haddii badanaa dhibaato kaa haysato inaad ku seexato waddooyinka, our 10 talooyin ku saabsan sida loo seexdo tareenka ayaa kaa dhigi doonta inaad u seexato sida ilmaha. Laga soo bilaabo safarka tareenka daruuriga u ah talooyinka gudaha ee barta ugu fiican ee riyooyin macaan tareen kasta, waxaan guda galaynaa safar riyada macaan!
1. Talooyin Sida Loogu Seexdo Tareenka: Keen buste
Cimilada tareenadu waxay u egtahay inay tahay chili, iyo haddii aad leedahay dheer ama safarka tareenka habeenkii ka hor, in loo diyaar garoobo. Waa inaad dareentaa gebi ahaanba nasasho iyo inaad nasato safarkaaga, iyo buste khafiif ahi waxay jawaab u noqon kartaa safarka tareenka ee ugu dhib badan abid.
Si looga fogaado habeennada hurdo la'aanta ah iyo u gariirinta safarkaaga filasho ama AC keliya, marwalba waa inaad xirtaa buste. Iyadoo aan loo eegin xilli ka baxsan, had iyo jeer waxay ku dhowdahay jiilaalka tareennada. Sidaas, soo qaadashada buste waa midka ugu sarreeya 10 talooyin ku saabsan sida loo seexdo tareenka. Ku duuduubka bustaha hoostiisa ayaa toos kuugu diri doona dhulkii riyada.
2. Ku Dhig Liistada Ciyaaraha Nasashada On Spotify
Laxanka dejinaya ee dhagahaaga ku jira ayaa la mid ah laydh marka qolku buuq ama buuq badan yahay. Sidaa darteed, waa inaad kudiyaarisaa dhowr liistada liiska Spotify si aad u hubiso in waxa kaliya ee aad maqasho uu yahay muusig. Sidan ayaad uga badbaadi doontaa khuurada ama sheekaysiga rakaabka kugu xiga.
Dabeecadda dabeecadda, liisaska nasashada ee vibes, ama laxanka fanaanka aad jeceshahay, waa xulashooyinka liiska ugu fiican si aad ugu seexato tareen. Muusikada ayaa ka mid ah 10 siyaabaha ugu wanaagsan ee lagu seexdo tareenka, gaaban ama safar dheer.
3. Talooyin Sida Loogu Seexdo Tareenka: Keen barkimo qoorta la buufin karo
Ma jiraan wax ka xun in aad ku soo tooso adigoo nabar qaba oo qoorta adag. Sidaa darteed, barkin qoorta la buufin karo ayaa muhiim u ah safarada tareenada. Sidan, qoortaada waa la taageeray, waxaadna ka kici doontaa hurdo macaan, wejigaaga dhoola cadeyn.
Haddii kale, waxaad halis ugu jirtaa inaad biimayn cusub bilaa qoor adag, iyo inaanay jirin hab lagu bogaadiyo dhammaan meelaha cusub oo lagu qabsado aragtiyaha ugu fiican.
4. Keen Dhagaha
Good, sameecadaha sameecadaha ku dhejiya ama sameecadaha dhagaha ayaa saaran liiska hubinta safarka. Sameecadaha dhagaha ayaa muhiim u ah safarka tareenka weyn, iyo kuwa liiska Spotify ee safarka bon.
Haddii aad ku ilowday dhagahaaga dhagaha guriga ama hudheelka, dukaamo badan ayaa ku yaal rugta tareenka. Laga soo bilaabo bartamaha iyo xarumaha tareenada mashquulka badan saldhigyada yar-yar iyo kuwa ka baxsan-garaaca, samaacadaha dhegaha ayaa ah badeecada aad ka heli doonto meel kasta.
5. Talooyin Sida Loogu Seexdo Tareenka: Labis raaxo leh
Lakabyada, cudbi, iyo dharka dharka ku habboon ee deegaanka u ah waa qasab raacitaanka tareenka. Bal qiyaas 8 saacadaha tareenka ee funaanad cuncun ama shaati khafiif ah, balan habeen hurdo la'aan iyo madax xanuun subax.
Waxaa laga yaabaa inaadan dareemin raaxo inaad ku labbisto dhar tareen ah, laakiin tababarayaasha iyo pullover waa dharka hurdo ee tareenka ugu fiican. Labbis raaxo leh ayaa ka mid ah kuwa ugu sarreeya 10 sida loo seexdo tareenka, safarkana ugu fiican.
6. Keen Maska Hurdada
Safar kale oo muhiim ah dabcan waa maaskaro ugu dambeysa ee hurdada. Dib u dhig, indhahaaga dabool oo nal kasta oo kaa fogana waa waxa kaliya ee aad ugu baahan tahay hurdo fiican. Waa xaqiiqo la ogyahay haddii aad rabto inaad seexato habeen wanaagsan, waa inaad ka qaaddaa wixii carqaladeyn kara, oo naftaada ka saar nalka nooc kasta oo uu yahay.
Haddii ay dhacdo inaadan ku safrin qol gaar ah, mana xakamayn doono iftiinka shidan, Hubso inaad xirto maaskarada hurdada. Markaasuu, ma heli doontid wax aad ka walwasho haddii rakaabka kaa xiga uu go'aansado inuu akhriyo habeenka oo dhan ama haddii nalka tareenku aad u dhalaalayo.
7. Talooyin Sida Loogu Seexdo Tareenka: Hantidaadu Badbaado
Boorsada yar ama boorsada garbahaaga iyo hoosta lakabyada ayaa ah habka ugu wanaagsan ee lagu ilaalin karo lahaanshahaaga. Hubso inaad haysato meel ku filan oo baasaboorkaaga ah, jeebka, mobile, iyo aalado kale oo aad qorsheyneyso inaad soo qaadato.
Sidan ayaad awoodi doontaa inaad hesho safar tareen oo aan walwal lahayn, intii aad ka seexan lahayd hal il oo furan.
8. Buug Meel Dhex Dhexaad Gawaarida
Meesha ugu fiican ee riyada macaan waxay ku taal bartamaha gawaarida. Sababta tan ayaa ah in dhexda ay aad uga fog tahay meel laga soo galo, haddiiba ay jiraan joogsiyo jidka socda. Intaa waxaa dheer, waad badbaadi doontaa oo waad ka dhawaajin doontaa musqusha iyo wixii caraf ah.
Si kastaba ha ahaatee, haddii aad ku safreyso tareen hurdo, waxay u badan tahay inaadan la kulmayn wax caqabad ah. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda, in tareenada seexda waa tareenada A-B, oo aan joogsi lahayn jidka, Sidaa darteed iyo, hakad la'aan.
9. Telefoonkaaga Fogee
Maalmahan dunida oo dhan waxay ku jirtaa taleefankaaga gacanta. Iyadoo barnaamijyo iyo ciyaaro aan dhammaad lahayn, caqabadda ugu weyni waa inaad gasho oo aad taleefankaaga dhigto. Tani gaar ahaan way adagtahay markaad kujirto safarka masaafada dheer, tareenka, iyadoo meelna looga baxo.
Si kastaba ha ahaatee, mid ka mid ah talooyinkayaga ugu sarreeya ee lagu seexdo tareenka ayaa ah inaad taleefankaaga ku rito bacda, ama xitaa qaabka duulimaadka.
10. Talooyin Sida Loogu Seexdo Tareenka: Soo qaado Qalabka Akhriska
Ma jiraan wax maskaxda dejiya marka loo eego sheeko wanaagsan, waana sida saxda ah ee aad ugu baahan tahay hurdo weyn tareenka. Keenida joornaalka aad jeceshahay, ama buug ku qor a safarka tareenka waa mid ka mid ah talooyinka ugu fiican ee lagu seexdo tareenka.
Markaad akhrinaysid maskaxdaadu waxay u safreysaa meel kale, goob, oo walwalka maalinta oo dhan ayaa baaba'a. Akhrin weyn waa jimicsi nasasho oo aad u fiican, taking your mind off any meticulous details. For an hour or two, waad iska sii baxaysaa, waana ku filan tahay inaad hurdo ku seexato oo aad riyooto.
halkan at Save A tareenka, waxaan ku farxi doonaa inaan kaa caawinno qorsheynta safarka tareenka ee aan la iloobi karin, oo leh kuraasta ugufiican iyo qiimaha ugufiican ee hurdada tareenka cajiibka ah.
Ma rabtaa inaad ku dhajiso bartayada "10 Talooyin Sida Loogu Seexdo Tareenka" boggaaga? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftips-how-sleep-on-train%2F%3Flang%3Dso የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
BestTipsSleeponTrain hurdo sleeper SleeperTrainsEurope SleepOnATrain tareen safarka Talooyin safarka tareenka